Falanqaynta Saadaasha - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Farsamada Falanqaynta Saadaasha
marsiin Falanqaynta Saadaalinta si aad u fududaysid habkaaga waxqabadyada wax -ku -oolka ah, GUDBINTA go'aanka iyo gaadhsiinta natiijooyin ganacsi oo waara. Dunida maanta tignoolajiyada udub dhexaad u ah, horumarka tignoolajiyadu waxa uu sameeyay horumar suurto gal ah Analytics Xogta laga bilaabo xalalka caadiga ah ee BI ilaa saadaalin iyo falanqaynta daawada Xal. Falanqaynta Saadaalinta waxay ka caawisaa saadaalinta suurtagalnimada mustaqbalka iyo isbeddellada iyo go'aan -qaadasho degdeg ah. Waa farsamooyinka ay ganacsatadu aadka u raadiyaan si ay u aqoonsadaan “qiimaha cusub” ee ku dhex xidhan xogta ay hore u haysteen iyagoo saadaalinaya aragtiyaha, isbeddellada mustaqbalka iyo inay gaadhaan go’aamo ka wanaagsan sidii loo dardargelin lahaa koboca ganacsiga.
Gartner wuxuu ku tilmaamayaa Falanqaynta Saadaasha sida hab kasta oo loo maro Macdanta Macluumaadka oo leh afar sifo:
1. Xoogga saaridda saadaasha (halkii laga sheegi lahaa sharraxaadda, kala soocidda ama ururinta)
2. Falanqaynta degdega ah oo lagu cabbiro saacado ama maalmo (halkii bilaha dhaqameed ee caadiga ah macdanta xogta)
3. Xooga la saarayo ku -xirnaanshaha ganacsiga ee aragtiyaha ka soo baxay (ma jiro falanqayn munaarad fool -maroodi)
4. Xoojinta (sii kordhaysa) ee fududeynta adeegsiga, taasoo ka dhigaysa aaladaha ay heli karaan adeegsadayaasha ganacsigu
Falanqaynta Saadaalinta wuxuu isticmaalaa farsamooyin kala duwan si uu u horumariyo moodooyinka saadaasha wuxuuna caawiyaa saadaalinta aragtiyaha iyo qaababka.
Ka faa'iideysiga aragtiyadan, shirkadaha waxay awoodaan inay si fiican u fahmaan adeegsadayaashooda oo ay u kaxeeyaan go'aan istiraatiiji ah si ay u abuuraan khibrad macmiil oo gaar ah, shaqsiyeed iyo hal abuur leh inta lagu jiro wareegga nolosha macmiilka.
Falanqaynta Weyn iyo Falanqaynta Saadaasha
Teknolojiyada xogta waaweyn ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata falanqaynta saadaalinta maaddaama ay bixiyaan sirdoon ku saabsan mustaqbalka iyagoo adeegsanaya aragtiyaha Xog Weyn. Teknolojiyada Xog -weynaha waxay falanqeeyaan xog aad u tiro badan waqtiga dhabta ah, oo ay ku jiraan xog qaabeysan iyo qaabeysan, iyo aragtiyada laga soo qaatay falanqayntaas waxaa loo adeegsan karaa si loo wanaajiyo hufnaanta hawlgalka, sahaminta fursadaha dakhli cusub iyo faa'iidooyinka tartanka. Big falanqaynta xogta softiweerka waxaa loogu talagalay inuu la shaqeeyo aaladaha xogta waaweyn, kuwaas oo ka kooban kaabayaasha, wanaagsanaanta, muuqaalaynta, maareynta, iyo lakabka falanqaynta. Lakabka gorfayntu waa qaybta udub dhexaadka u ah dhismaha falanqaynta saadaalinta xallinta dhismaha xogta weyn ee ganacsiga. Falanqaynta Saadaalinta tilmaamaa habab macno leh oo xog weyn ah si loo saadaaliyo dhacdooyinka mustaqbalka loona qiimeeyo suurtogalnimada natiijooyin kala duwan oo suurtagal ah si shirkaddu ay u gaadho go'aamo caqli-gal ah
Faa'iidooyinka iyo Qalabka
Waxaa jira shirkado badan oo la isticmaalo Falanqaynta Saadaalinta. Tani kaliya kama caawinayso inay sahamiyaan fursadaha suuqa cusub, hagaajinta hufnaanta hawleed ee habka ganacsiga, xoojinta daacadnimada macaamiisha iyo haynta laakiin sidoo kale waxay awood u siineysaa inay si sax ah u maamulaan habka bartilmaameedka macaamiisha iyo sahaminta moodooyinka ganacsi ee cusub. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ganacsiga tilmaamaya ayaa ah
1. Kordhinta wareejinta iibka
2. Kordhi heerka jawaabta ololaha
3. In la yareeyo kharashaadka suuqgeynta
4. Iska yaree murugada macmiilka
5. Kordhi helitaanka macaamiisha, haynta, iyo daacadnimada iwm
6. Falanqaynta Saadaalinta Qalabka:
7. Qalabyo baaxad leh ayaa loo adeegsadaa qaabaynta saadaalinta iyo falanqaynta. Qaar ka mid ah magacyada iibiyaha caanka ah ee suuqa waa:
R, Apache Spark, HP Haven Falanqaynta Saadaalinta, Actian Vortex Express, Konstanz Macdanta Macdanta.
Google Prediction API, Microsoft Azure Barashada Mashiinka, BigML, Saadaalin
Qodobada Muhiimka ah:
Focus on saadaasha / isbeddellada iyo saadaasha halkii aad ka ahaan lahayd oo keliya xog ururinta, abaabulidda, iyo ururinta.
Saadaal waqti-ku-xiran iyo saadaalin iyadoo la qaadanayo go'aanno ku saabsan fikradihi ugu dambeeyay iyo kuwii ugu dambeeyay
Faham hadafka ugu dambeeya ee Falanqaynta Saadaalinta ururka.
Qeex habka loogu talagalay in loo jiheeyo dhinaca Ganacsiga Saadaasha
Ka dhig isticmaalayaasha ganacsiga inay ku mashquulaan waxa Falanqaynta Saadaalinta waxay ka caawin kartaa inay gaadhaan.